Hadalki safiirka Imaaraatka oo caddeeyey beenta iyo 2 wajiilenimada Imaaraadka Carabta ee SOOMAALIYA - Caasimada Online
Home Warar Hadalki safiirka Imaaraatka oo caddeeyey beenta iyo 2 wajiilenimada Imaaraadka Carabta ee...
Hadalki safiirka Imaaraatka oo caddeeyey beenta iyo 2 wajiilenimada Imaaraadka Carabta ee SOOMAALIYA
Booskii Itoobiya ee qalalaasaha iyo diblomaasiyadda gurracan ee Soomaaliya waxaa dhowaanahan galay Imaaraadka kuwaas oo bilaabay in ay si dadban iyo si toos ahba isugu dayaan in ay u majaxaabiyaan dowladnimada Soomaaliya.
Taas, waxaa ka dhashay xasarado badan oo dalka ka dhacay, eedeedana dusha loo saaray ama ay ku caddaatay Imaaraadka.
Maalinba maalinta kad dambeeysa waxaa sii xumaanayey ciilaaqaadka dowladda hadda jirta iyo Imaaraadka ilaa iyo gaadho heer lacag 10m oo dollar ku dhaw looga qabtay madaarka Aadan Cadde maalin ka hor subxii loo ballansanaa in codka kalsoonida loo qaado gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Shiekh Cusmaan Jawaari.
Waxa ay si toos ah cilaaqaad ula sameysaa Somaliland iyada oo ka sameysatay saldhig ciidan, dekedda Berbera kala wareegtay muddo 30 sano ah kana siisay Itoobiya saami dhan 19%.
Waxaa is xigay talloobooyin ceel dheer marba ku sii ridayey diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Imaaraadka waxa ayna ka bexeen xarumihii ay ku tababari jireen ciidamada dowladda qaar ka mida sida xarunta General Gordon, Puntland iyo Cisbilaakii weynaa ee ay ku lahaayeen Muqdisho.
Yeelkeede, safiirka Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka Mr. Mohamed Ahmed Osman oo ay wasaaradda arimaha dibedda u yeertay 26kii Maarso 2018 ayaa sheegay in ay ilaalinayaan madax banaanida iyo nabad galyada Soomaaliya.
Taas oo ay jirto, hadana wali Imaaraadku ma joojin farogalintii iyo ku xad gudubkii xasiloonida, siyaasadda iyo midnimada Soomaaliya.
Iyada oo ay taasi jirto, ayuu dhawaank shirkii Brussels Soomaalida loogu qabtay safiirka Imaaraadka u fadhiya Belgium-ka, dalalka Scandinavian-ka iyo midowga Yurub Mohammed Issa Al Suwaidi ku celiyey in ay dhawrayaan xasilloonida iyo mdinimada Soomaaliya!
Waxaa yaab leh in Imaaraadka ayaga oo ballan-qaadaya ilaalinta madax banaanida Soomaaliya, haddana ay si toos ah ula macaamilayaan maamullo sheegay inay yihiin dalal ka madax banaan Soomaaliya, sida Somaliland. Hadaba, soo lama oran karo dimlomaasiyadda Imaaraadka ee Soomaaliya waa mid ku dhisan laba wajiilenimo iyo been cad?